अमरावती कान्तिपुरी नगरी | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
असार २९, २०७५ शुक्रबार १०:४:४९ | उज्यालो सहकर्मी
आज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०५ औं जन्मजयन्ती । भानुजयन्तीको अवसरमा हामीले निबन्धकार भैरव अर्यालको भानुको कविता शैलीमा आधारित व्यङ्ग्य निबन्ध ‘अमरावति कान्तिपुरी नगरी’ प्रकाशन गरेका छौँ । निबन्ध अर्यालको निबन्ध संग्रह ‘जयभुँडी’बाट साभार गरिएको हो ।
स्वर्गङ्गाको सिरसिर बताससित भानुभक्तको स्वर–सतार पनि जब बहन थालेको थियो त्यहाँ उपस्थित सारा इक्षअप्सराहरू सपेराको बाँसुरीकमा झुमेका नाग–नागिनीझैँ अथवा भनूँ कृष्णजीको मुरलीमा लट्ठिएका गोप–गोपिनीझैँ हेरेको हेर्यै भैहाले । आशुकवि भानुभक्तलाई न मूड चाहियो न कलम नै, त्यसदिनदेखि कविता रच्न थालेका रच्ता – रच्तै कति शरद बिते, कति वसन्त बिते, उनलाई पत्तै भएन । धेरै वर्षपछि एक्कासि उनको मुखबाट निस्क्यो –
‘अमरावती कान्तिपुरी नगरी’
देवकोटाको कुरा सुनेर भानुृभक्तलाई तुरुन्त ओर्लिएर एकपटक कान्तिपुरको सैर नगरी भएन भन्ने लाग्यो तर जाने कसरी ? उनी बिलखबन्दीमा परि गुनगुनाउन थाले–
रामायणकार जानुभक्त भानुका भक्त मात्र थिएनन्, रामभक्त पनि हुने भइहाले । रामभक्तको प्रताप कति अलौकिक हुन्छ भन्ने कुरा हनुमानको चरित्रबाट प्रस्ट छँदै छ । जुुन भक्तिको प्रतापले हनुमानले पुच्छरमा आगो लिएर त्यत्रो लङ्का जलाइदिए, त्यत्रो द्रोणाचल पर्वत हत्केलामा राखेर ल्याइदिए, त्यसै भक्तका प्रतापले हाम्रा भानुभक्त पनि कसरी–कसरी एक दिन टुप्लुक्क बालाज्यूमा उत्रन आइपुगेछन् । सय वर्षभन्दा अगि मरेको मान्छे यहाँ आउला भन्ने कसलाई विश्वास लाग्ला र ! कुरा यति हो – एक दिन आफ्नो प्यारो अलकापुरी हेर्न हाम्रा आदिकविजी आइपुगेछन् काडमाण्डौंमा । त बालाजूको बाइस–धारा उद्यान देख्नेबित्तिकै उनी एकछिन त जिल्लाराम परे, झण्डै यो त अमरावतीको अप्सरा – उद्यानजस्तै पल्टिए, पल्टिनु के थियो कविताको मूल फुटिहाल्यो –
पृथिवी तल भरीमा स्वर्ग जानि लेख्याँ ।।’
यत्तिकैमा केही युवा–युवतीहरू जोडी–जोडी मिली उद्यानभित्र पसेकाले कविता रच्तारच्दै भानुभक्तजीका आँखाचाहिँ ट्याक्क युवतीको टाइट हिपतिर लाग्न पुगेछन् । ‘आमै, यी केटीहरू नागकन्या त होइनन् । लगाइ र हिँडाइ त ठ्याम्मै उस्तै छ बा, हेरुँ राम्ररी !’ भानुभक्त सम्पूर्ण ध्यान उनीहरूकै वक्रा अङ्गिमा र भावभङ्गिमातिर पुगेर अड्यो । युवकहरू पनि माथिमाथि फुकिफुकाउ तलतल कसिकसाउ देख्दा भानुभक्तजी झन् दङ्ग परे । हुनत त्यहाँ अरू पनि बालक, बुढा, गृहिणी सब थिए, तर ठिटा – ठिटीको नृत्यलीलामा ती त केवल आफैजस्ता दर्शक मात्र । आखिर उनलाई के लाग्यो भने काठमाडौंको ठाउँ मात्रै साँघुरिँदै गएको होइन, मान्छेको लवाइ पनि साँघुरिँदा–साँघुरिँदै काँचुली नै बनिसकेछ ? रसिक भानुभक्तलाई यो परिवर्तन झन् रोचक लाग्यो र कविता पनि फुरिहाल्यो –
सबै थरीका बीच भानुभक्त पनि एक बेग्लै थरी व्यक्तित्व थिए– नयाँ सडकमा । सबै दूतका बीच उनी आफू काव्यदूत थिए स्वर्गका । यसैले वास्ता गरिरहनुभन्दा २/४ जना कविलाई नै भेटेर बात मार्न आदिकविलाई मन लाग्यो । तर भेट्ने कहाँ चएर, कसलाई ? उनी अन्योलमा परे । तैपनि नजिकैको एक युवकलाई कोट्याउँदै उनले सोधे–‘यहाँ को–को लेखक कवि कहाँ–कहाँ छन् हँ ?’ युवकले नाक नेप्ट्याएर जवाफ दियो –‘पुराना कविलेखक अलिकति एकेडेमीतिर साहित्यमा रिसरागबारे रिसर्च गर्दै छन् भन्ने सुनेथेँ, नयाँ लेखकहरू प्रायः यतै वरपर छरिएका होलान् । तपाईं कसलाई खाज्नुहुन्छ, एउटा बिलकुलै बफाउँदो नयाँ कवि त म पनि हुँ ।’ भानुभक्तले नमस्ते गर्दै खुसी प्रकट गरे –“ओहो ! त्यसो भए त ढुङ्गो खोज्दा देउता मिलिहाल्यो नि । यहाँले कति वर्ष काव्यसाधना गर्नु भएको छ कुन्नि ?” युवकले चारमिनारको (भारतमा बनेको सस्तो खाले चुरोट) बट्टा उचाल्दै जवाफ दियो – ‘मैले लेख्न त यसपालिदेखि थालेको हुँ, तर गोडा सातेक लामालामा कविता लेखिसकेँ ।
एउटा ताजा कविता सुन्नुहुन्छ भने सुनाई पनि हाँलु ?’ आदिकवि भानुभक्त कविको कविता सुन्न तरखराउँदै थिए, अर्काे ठिटो आएर भन्न थाल्यो, “तँ पनि कविता लेख्ने ? कवितै सुुन्नुहुन्छ भने सुन्नुहोस् बाजे, बिलकुलै आधुनिक–यही पीपलको बोटको कविता ।” ‘ओहो ! यहाँहरू सबै कवि हुनुहुँदो रहेछ । होइन, यहाँ अरू कवि पनि छन् ?’ ‘अरू को छन् र ? ’–भनी नयाँ कवि बताउँदै थिए, पत्रिका बेच्ने हकरले उहीँनिर आएर भन्यो– ‘एउटा कवि त म पनि छु हजुर !’ उसले भन्दाभन्दै पसलेले कुरा थप्यो –‘यहाँ मिनिष्टरदेखि कम्पोजिटर सम्म सबै कवि ।’ जेहोस् आदिकविलाई कविहरू बढेको सुन्दा खुसी नै लाग्यो । यस्तै खुसी–खुसीमा एकजना सज्जनले कविजीलाई नजिकैको रेष्टुराँतिर डोर्‍याए । उनी रेष्टुराँभित्र पस्नमात्र के लागेका थिए उनको बिर्खे टोपीमा एउटा मरेको मुसो फ्वात्त पर्न आयो । उनी जिल्ल परेर मास्तिर हेर्दै थिए । अर्काे झ्यालबाट एक थुप्रो फोहर–फाल्नको टाला पुष्पवर्षा भएझैं सडकमा बर्सिए । यो वर्षाले आफ्नो स्वागत गरेको हो कि विरोध गरेको हो, उनलाई ठम्याउन धौधौ पर्याे ।
उनी गुनगुनाउँदै थिए, त्यहीँनेर पेटीमा एक डल्लो भई सुतेको एउटा केटो उठेर भन्न लाग्यो– ‘दाजु ! तिम्रो पछ्यौराको एउटा छेउ मलाई पनि देऊ न, साहै्र जाडो भयो ।’ भानुभक्तले उसलाई बोलाएर जम्मै पछ्यौरा ओढाइदिए । जीउ तातेपछि केटाले भन्यो ‘भात खाने जग्गा मासेर त्यत्रा घर बन्छन् तर गरिबको छोरालाई सधैँ पेटीका बास । आज भानुजयन्ती, राति ९ बजेसम्म सारा मान्छे यहीँ जम्मा भएर बेलामा सुत्न पाइएन । यो ‘भानुभक्तको सालिक भन्छ, यो भानुभक्त भन्ने कुनचाहिँको नाम रेछ हँ दाई ? भानुभक्तलाई पनि देखेनौ हगि ?’